Otu esi eme spain spinner | Akụrụngwa n'efu
Izu-ụka ole-na-ole gara aga, igwe dị iche-iche n’usoro nke kpakpando nwere ọnụ-ọgụgụ atọ apụtawo n’ime ndụ anyị nke na-agbagharị n’onwe ha, dịka a ga - asị na ha na - agba elu-igwe ma nwee ọdịdị ọzọ. Andmụaka na ọ bụghị otú ahụ ụmụaka e dazzled site na nke a gadget nke a na-akpọ Spinner Spinner. Ndị a Fidget Spinners bụ afọ nke afọ maka ụmụaka ụlọ akwụkwọ mana ha bụkwa egwuregwu nzuzu maka ọtụtụ ndị toro eto.
N’ụbọchị ndị a, ejiji a na - ewepụta puku kwuru puku euro, mana ọtụtụ na - ekwu na “ụdị ejiji” a abụghị nke ebe ọ bụ na ngwa Fidget Spinner adịlarị afọ, mana Kedu ihe bụ spinner fidget? Kedu ụdị Fidget Spinner dị? Anyị enwere ike ịre onwe anyị ụdị ngwa a?
1 Kedu ihe bụ Finget Spinners?
2 Kedu ụdị Fidget Spinner dị?
3 Kedụ ka m ga - esi nweta Spinner Fidget?
4 Kedụ ka m ga - esi wulite Spinner eji eme ụlọ?
Kedu ihe bụ Finget Spinners?
A Spinner ma ọ bụ naanị a Spinner bụ ihe egwuregwu na-eme ka nchekasị nwee nchekasị nke nwere oghere dị n'etiti nke nwere otu ma ọ bụ karịa biarin na ogwe aka abuo ma obu ato putara site na etiti etiti na ejedebe na abia. Ngwongwo ihe ntughari a nwere ike di iche iche obu ezie na ihe kachasi ike bu ichota ihe eji eme ihe nke plastik ma obu ihe ndi yiri ya.
Ihe egwuregwu a na-eme ka nchegbu na-ebelata amuru na 1993 dika engineer engineer nke nwere nsogbu ikwurita okwu nwa ya nwanyi n'ihi ọrịa. A na-akpọ injinia a Catherine Hettinger. Ma n’agbanyeghi n’ọtụtụ n’ime anyị nwere ike iche na ọ bụ ugbu a bụ otu n’ime ndị kacha baa ọgaranya n’ụwa, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị n’ihi na patenti tufuru ya afọ ndị gara aga. Mgbe nke a gasịrị, ọtụtụ ụlọ ọrụ ahụike ejirila "aka a na - agba aka" na-arụ ọrụ na ụmụaka na / ma ọ bụ ndị nwere autism, nchebara echiche, nchekasị, nchekasị ma ọ bụ ịda mbà n'obi.
Kedu ụdị Fidget Spinner dị?
Ugbu a enwere ọtụtụ ụdị nke Fidget Spinner, ebe ọ bụ na mgbakwunye na ejiji, ọ bụkwa ihe ndị nchịkọta. N'ozuzu, iji mee ka ọdịiche dị n'etiti ụdị, ndị ọrụ na-ewerekarị ihe abụọ: ụdị ihe na agba. Banyere ihe onwunwe ahụ, anyị ga-ekwu na a na-ewere ndị na-atụgharị igwe dị ka ndị dị elu, na-enwe ọfụma dị mma yana emechara ha. Mgbe ahụ, a ga - enwe ndị na - agba plastik, ndị a na - atụgharị ọnụ bụ ndị a na - ahụkarị na ndị nwere ajọ njọ. Ọ bụghị usoro izugbe, ya bụ, enwere ike ịnwe spinner plastik nwere ezigbo bearin, mana enwekwara ụdị "adịghị mma" nke nwere mmecha ọjọọ na mmejọ na-adịghị mma nke na-eme ka ahụmịhe ya na onye na-eme ya adịghị mma. Ekwesiri imesi ya ike na akụkụ kachasị mkpa nke spinetịji Fidget bụ amị. Dabere na ụdị agba nke Fidget Spinner nwere, ihe ntụgharị ahụ ga-adị elu ma ọ bụ dị ala karịa yabụ ga-enwe ọnụahịa karịa ma ọ bụ obere. Gbanye Akụkọ akụrụngwa Have nwere onye ndu na Fidget Spinner ụdị yana njikọ iji nweta akara ngosi ọ bụla.
Kedụ ka m ga - esi nweta Spinner Fidget?
E nwere ụzọ abụọ ugbu a iji nweta igwe Spinner: Ma ọ bụ na anyị zụrụ otu n'ime ndị a spinners ma ọ bụ na anyị ga-ewu otu nke anyị onwe anyị. Ebe ọ bụ na anyị nọ na akụrụngwa efu, ihe dị mma bụ na anyị na-ahọrọ nhọrọ ikpeazụ a, nke anyị ga-ekwu n'ụzọ zuru ezu, mana tupu nke ahụ, anyị ga-akwụsị na Spinner Fidget nke enwere ike ịzụta.
Ihe ịga nke ọma nke ihe egwuregwu ahụ bụ na Fidget Spinner na-akpa àgwà n'ọtụtụ ebe dị ka ọla edo n'onwe ya. Nke ahụ bụ, ọ nwere ọnụ ahịa na-agbanwe na-adabere na ngwaahịa, ọnụ ọgụgụ ebe ndị na-ere ya, wdg ... a na-emebu price nke 3 euro ma na-eru ọnụ ọgụgụ nke 10 euro na a okwu nke ụbọchị ma ọ bụ ọbụna awa. Eziokwu nke na-aga n'ihu ịdọta uche ọtụtụ, ọ bụghị naanị n'ihi mmetụta nke Fidget Spinner na-arụpụta kamakwa n'ihi mgbanwe a na ọnụ ahịa yana ahịa ọ na-akpata.
Ugbu a, anyị nwere ike ịwulite anyị Spinner Fidget anyị. Ọ bụrụ na anyị họrọ nhọrọ a, nhọrọ m na-ahọrọ karịa, anyị nwere ụzọ abụọ iji mee ya: ma ọ bụ anyị na-eji ihe eji emegharị emegharị na anyị wuru Fidget spinner na ọ dịghị onye ọzọ ga-enwe; O ọma anyị na-ahọrọ Akụrụngwa efu iji mepụta Spinner Fidget nkeonwe na o siri ike onye ọ bụla ọzọ ga-enwe mana nke ahụ ga-enwe mmezu "ụlọ ọrụ mmepụta ihe" ma e jiri ya tụnyere iwu ụlọ.
Kedụ ka m ga - esi wulite Spinner eji eme ụlọ?
Iwulite Spinner Fidget bu ihe di mfe ime. Nke mbu anyi gha enweta udi nke spinner, anyi nwere ike ime nke a na kaadiboodu, osisi, plastik siri ike, wdg ... Ihe obula gha eme. Mgbe ahụ, anyị na-eji bearin anyị nwere ike ịzụta n'ụlọ ahịa ngwaike ọ bụla. Mkpa dịkarịa ala otu amị, nke a ga-adị n'etiti akụkụ nke spinner.
Ma anyị nwekwara ike iji biarin na nsọtụ nke spinner, ee, ọ bụrụ na anyị ejiri bearin na nsọtụ anyị ga-eji ha na njedebe niile, ọ baghị uru iji ya naanị n'otu njedebe. Ọ dịkwa mma iji ehicha ebe anyị ga - ezu ike na mkpịsị aka gị mgbe Fidget spinner na - agbagharị. N’okpuru anyị n’etinye vidiyo nke otu esi arụ ụlọ spinner eji eme ụlọ, na vidiyo anyị ga - ahụ etu esi ewulite igwe na - agbago usoro.
Mana iwulite akụrụngwa na - akwụghị ụgwọ ọ bụla. Na isi, ewu site na ibi akwụkwọ 3D na-enye otu ihe ahụ mana iji nweta ọrụ ndị ọkachamara, inwe ike ịgafe spinner zụrụ mgbe ọ bụghị.
Maka owuwu nke spinner site na mbipụta 3D anyị ga-achọ ihe abụọ: a 3D ebi na PLA ma ọ bụ ABS na biarin. Ọ bụrụ na anyị nwere ihe abụọ a, naanị anyị ga-aga ebe nchekwa ihe wee budata ihe atụ nke anyị chọrọ (ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo aka na Autocad anyị nwekwara ike ịmepụta ya na ngwaọrụ a).
Ozugbo anyị nwere ihe nlereanya, Anyị na-ebipụta ya na ngwa nbipute 3D na mgbe anyị gwụchara anyị gbakwunye biarin. Ndị na-ebi akwụkwọ 3D na-ejikwa ụdị biarin ndị a, yabụ iji jikọta ihe ndị a, anyị nwere ike iji isi iyi ọkụ dịka welder. Inye ihe obere okpomọkụ na akụkụ plastik ga-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịtinye biarin.
Elsdị nke Fidget Spinner nọ na ebe nchekwa 3D ihe ama ama na ịntanetị. N'ime ha anyị nwere ike ịchọta faịlụ nke Fidget Spinner na-amasị anyị, budata ya ma bipụta ya. Mana nchekwa kwesịrị ka a kpọtụrụ ya aha pụrụ iche Ihe na-efu y Egggi.
Ebe nchekwa ndị a nwere narị narị e ọbụna ọtụtụ puku ụdị spinner anyị nwere ike ibudata ma bipụta n'ụlọ anyị. Ozizi o nwekwara ụdị spinner, mana pere mpe. Ọ bụrụ na anyị bụ ụwa ọhụụ na ụwa nke mbipụta 3D, ikekwe Instructables bụ ebe nchekwa gị n'ihi na na mgbakwunye na ịnwe faịlụ a na-ebipụta, ọ nwere ntuziaka nwere usoro ị ga - agbaso iji wee mebe spinner.
E nwere ọtụtụ ụdị na ụdị nke "spinner", mana imirikiti n'ime ha nwere ike wepụta ya n'ụlọ anyị ma ọ bụ jiri 3D nbipute. M na-ahọrọkarị ụzọ dị ọnụ ala ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere ego iji chekwaa, mana na nke a, echere m nhọrọ kachasị mma maka iwu nke spinner fidget bụ iji ngwa nbipute 3D na faịlụ site na ụfọdụ ebe nchekwa dị ka Thingiverse.
Nsonaazụ bụ nke izizi mbụ, nke na - akwụ ụgwọ dị oke ọnụ ma nwee ọfụma ọkachamara. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị mmadụ niile nwere ngwa nbipute 3D n'aka, mana enwere ike ịnye akụkụ ahụ site na ọrụ mbipụta 3D ma ọ bụ na-ahọrọ ụlọ na recycled ihe, a obere ọkachamara ọzọ. I kpebie, mana iwulite Fidget Spinner bụ ihe na - atọ ụtọ karịa ịzụrụ ha Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Fidget Spinner, egwuregwu ụmụaka anyị nwere ike ịrụ
Onye nbipute 3D a nwere ike imepụta ihe ndị ruru otu ton
Drones ga-abụ ndị ọhụụ graffiti ọhụụ na-adịghị anya n'ọdịnihu